Farreen Nageenyaatu Jeeqa jedhu Angawoonni Mootummaa
Manni maree bakka bu’oota Uummataa kan dhiyeenya raggaasise labsiin fooyyeessuu magaalaalee Master Plan Finfinne waliin kan wal qabate miti kan jedhan angawoonni naannoo jeequmsa uumameef farreen nageenyaa kan ittin jedhan itti gaafatamoo dha jedhan. ABO fi Ginbot 7s maqaa dha’aniiru.
Sabaa himaa itiyoopiyaan kanneen tuqaman angawoonni Oromiyaa labsiin fooyya’iinsa magaalaa kan caffeen Oromiyaa dhiyeenya raggaasise guddina isaanii kan saffisu.
Labsiin sun ennaa hojii irra oolus magaalaaleen kun ulaagaa sadarkaa addunyaa akka guutan gargaara jedhan. Angawoonni kun akka jedhanitti labsiin sun magaalaaleen kun walii walii isaanii akka deggeran seera godhus of keessaa qaba.
Magaalaaleen sun galii argatan guutummaatti misooma bu’uuraa kan ofii isaanii babal’isuuf akka oolchan kan godhu ta’uu itti gaafatamaan waajjira industirii Oromiyaa obbo Nigusee Mengistuu beeksisaniiru. Kanaaf labsiin Caffee Oromiyaatiin ba’e Master planii Finfinnee waliin kan wal argu miti jedhan.
Heerri biyya keenyaa mul’inatti akka lafa kaa’eetti naannoleen seera ofii isaanii baasu. Seerri kun kan ba’e naannoo Oromiyaa irratti. Labsiin sunis kan inni hojii irra oolu magaalaalee Oromiyaa irratti. Malee Master plani waliin qaruma wal hin argu jedhan.
Labsii sanas ta’e master planiin sun magaalaalee misoomaan wal qabsiisa malee faallaa heeraa akka hin ta’in kan ibsan immoo itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Oromiyaa obbo Fiqaaduu. Qabiyyeenis haa ta’u akeekaan naannoo mootummaan caaseffame tokko isa kaan waliiin kaayyoo walitti makuu qaruma hin qabu.
Humnoonni kanaaf kakaasanis gocha isaanii irraa akka of qusata mootummaan ni yaadachiisa. Hawaasichis kana hubatee olola humnoonni kun oofan kana duras eenyuun akka ta’an ni beeka waan ta’eef adeemsi baruu fi barsiisuu akka itti fufu akka godhu akka mootummaatti waamicha dabarsina jedhan.
Obbo Fekaaduun ibsa kana irratti magaalaalee Oromiyaa fi waaltaalee barnootaa tokko tokko keessatti jeequmsa uumameef humnootii Iityoopiyaa shorokeessota ittiin jedhan itti gaafatamoo taasisaniiru. Master Palan Finfinnee fi dhiyeenya kan raggaasiasme labsiin fooya’iinsa magaalaalee Oromiyaa uummata naannoo akka miidhu godhanii kan ololan humnootii kana ta’uu ibsaniiru.
Qaamonni siyaasaa adda addaa, humnoonni siyaasaa kanneen farreen nageenyaa ta’an keessaa fi alaa sabaa himaalee adda addaatiin olola kijibaa isaan oofani kun jedhan.
ABO FI Ginbot torba maqaa dha’uu dhaanis ragaa humnoonni kun tamsaasan ulaagaa isa kamiinuu yoo ilaalame hundee kan hin qabaanne jedhan obbo Fiqaaduun. Barattoonni barnoota dhaabanis gara hojii baruu fi barsiisuutti akka deebi’an waajjirri kominikeeshinii mootummaa kan yaadachiise ta’uu gabaasi sabaa himaa Itiyoopiyaa kun beeksiseera.